Warar isqilaafsan oo ka soo baxaya Dagaalo xoogleh oo ka dhacay Ceelwaaq Gedo, – SBC
Warar isqilaafsan oo ka soo baxaya Dagaalo xoogleh oo ka dhacay Ceelwaaq Gedo,
Posted by editor on Siteenbar 11, 2011 Comments
Warar is qilaafsan ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo soconayay mudo saacado ah oo maanta ku dhexmaray xarakada mujaahidiinta Alshabaab iyo ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya deegaanka ceel waaq ee gobolka Gedo .
Dagaalka oo xoogiisa dhacay saaka hirtii waa beri ayaa waxaa sida la sheegay waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo labada dhinac ee dagaalamay isugu jira.
Inta ay ka warheyso saxaafada dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay tiro dad ah oo kor u dhaafaya 20 qof halka ay intaasi ka badanyihiin dhaawaca ka dhashay.
Ciidmada Dowlada KMG ah oo ku sugnaa markii hore Ceelwaaq ayaa la sheegay in halkaasi laga saaray islamarkaana si buuxda ay gacan kuheynta magaalada Ceelwaaq ay ula wareegeen xoogaga xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Waxaa iyana sidoo kale jira warar is dabayaacaya oo xiliyadii dambe ee maanta soo baxayay kuwaas oo sheegayay in markale dagaal dhinacyo badanleh ay ciidamada DKMG ah ku soo qaadeen gudaha Deg Ceelwaaq halkaas oo ay dib uga qabsadeen Ciidamadii xarakada Alshabaab.
Sikastaba ha ahaatee dagaaladan ayaa ka dambeeyay dagaalo kale oo ciidamada Dowlada KMG ah looga soo saaray deegaano ay ka mid tahay deegaanka Buursaar, ugu dambeyntiina ilaa iyo hada lama xaqiijinkaro xaalada dhabta ah ee ka taagan Ceelwaaq.
C/qadar Maxamed Salaad
SBC International Baardheere